Android Pie anaghị apụta na nkesa gam akporo Septemba | Androidsis
N'izu ole na ole gara aga, e bipụtara data nkesa Android maka ọnwa Ọgọst. N'ọnwa a, anyị nwere ike ịhụ ka Oreo si aga n'ihu na -eto, n'agbanyeghị na ọ na -eji nwayọ nwayọ, yana nke ahụ Android Pie emebeghị ihe ngosi na ndepụta. Cheta na ị ga -enwerịrị ihe karịrị 1% ịpụta na ya. Google ugbu a na -ekerịta data maka ọnwa Septemba.
Na n'ime ha, ka na -enweghị ozi gbasara gam akporo Pie. Edepụtabeghị ụdị sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ n'ihi na ọ jisiri ike nweta 1% ahụ achọrọ. Ka ọ dị ugbu a, Nougat na -aga n'ihu na -achịkwa ndepụta ahụ.
Nke bụ eziokwu bụ na enweghị mgbanwe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ bipụtara izu abụọ gara aga. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Nougat ka nọ n'ọnọdụ mbụ, yana oke 30,8% ọ bụrụ na anyị agbakwunye nsụgharị abụọ nke sistemụ arụmọrụ. Ọzọkwa nsụgharị ndị ọzọ ka bụ otu.
Ka ọ were Ọ bụ ihe ijuanya na Google wepụtara data a ka izu abụọ gachara site na nkesa August, ebe enweghị mgbanwe ọ bụla. Oreo na -aga n'ihu na -echegbu onwe ya maka nwayọ nwayọ ọ na -aga n'ahịa, ịbụ ụdị nke anọ a na -ejikarị, ebe gam akporo Pie apụtaghị na ndepụta ahụ.
Malite na Ọktọba, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ekwentị na -emelite na gam akporo Pie n'ahịa. Nke a kwesịrị ịkwalite ụdị sistemụ arụmọrụ a ma anyị kwesịrị ịhụ mmụba ahịa ahịa ya. Mana enwere nchegbu maka enwere ike jiri nwayọ were were tinye ya.
Anyị enweela ike ịhụ ya na Oreo, nke otu afọ gachara na -anọghị na ọtụtụ ekwentị, yabụ otu ihe ahụ nwere ike ime na gam akporo Pie. Anyị na -atụ anya inwe akụkọ gbasara ụdị ndị a ga -emelite ụdị nke a n'oge adịghị anya. Kedu ihe ị chere maka nkesa a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Achịcha Android anaghị egosi na data nkesa nke September na September
Samsung iji kpughee Quad Camera ekwentị na October 11